Wararka - Waa maxay farqiga u dhexeeya maraakiibta kalluumaysiga ee leh dhexroorka koobka 3000 iyo dhexroorka koobka 4000?
Doomaha kalluumeysiga waxaa u dhexeeya saddex farqi oo kala ah 3000 iyo 4000. Dhererka xarigga kalluumeysigu wuxuu ku kala duwan yahay koobka, xawaaraha wax lagu helaa wuu kala duwan yahay, miisaanka doonta kalluumeysiguna wuu ka duwan yahay;
Marka la isticmaalayo doonyaha kalluumeysiga badda, jaangooyooyinka tusaalaha ah ee doonyaha kalluumeysiga waxaa badanaa lagu calaamadeeyaa erayo sida xxx-3000 iyo xxx-4000. Markaa 3000 iyo 4000 halkan waxaa loola jeedaa cabbirrada dhexroorka koobka. Waa maxay dhexroorka koobka? Marka koobka wareegga wareegaayo, dhexroorka dibadda ee jirka koobka waxaa lagu magacaabaa dhexroorka koobka; Haddii tusaalaha doonta kalluumeysiga lagu calaamadeeyay 3000, waxay ka dhigan tahay in dhexroorka dibedda ee koobka dabaysha ee kalluumeysiga uu yahay 3cm. Haddii moodeelka lagu calaamadeeyay 4000, dhexroorka dibedda ee koobabka dabaysha ee kalluumeysiga waa 4cm; Tusaale ahaan, haddii tusaalaha markabka kalluumeysiga uu yahay 5000 /6000, waxaa loola jeedaa tan;
Ka sokow in kalluumeysatada la siiyo dareenka dhexroorka koobka, labada nooc ee cabbirrada calaamadeysan ayaa ka caawin kara inay si fiican u fahmaan dhexroorka koobka. Doonyaha kalluumaysiga oo leh dhexroor kala duwan oo koob ah ayaa dabaylo dherer kala duwan oo khadadka kalluumaysiga ah. Markay u dhigantaa, nidaamka biyaha ee la dabaqay isku mid ma aha. Xitaa haddii dhererka usha tuurku ka duwan yahay, xulashadu isku mid ma aha; Waxaa jira laba farqi oo waaweyn oo u dhexeeya 3000 iyo 4000 maraakiib kalluumaysi
Farqiga koowaad, lambar isku mid ah, 4000 doon kalluumeysi oo ka badan 3000 doon kalluumeysi, dhererka xariiqa qalooca ayaa dheer
Dhexroorka koobabka kala duwan ee maraakiibta kalluumaysiga ayaa u horseeda dherer kala duwan oo ah khadadka kalluumaysiga ee mataanaha ah. Inta badan maraakiibta kalluumaysiga, waxaa koobabka ku jiri doona tirooyin taxane ah, sida xxx-3000-0.32/150. Tirooyinkan taxanaha ah, XXX waa astaanta markabka kalluumeysiga, 3000 waxaa loola jeedaa dhexroorka koobka, 0.32 waa dhexroorka xarriiqda lagu taliyay ee weelka kalluumeysiga, iyo 150 waa dhererka ugu wanaagsan ee markabka kalluumeysiga oo lagu xardhay khadadka kalluumeysiga, waa 150 mitir.
Tixraac ahaan, 0.32 waa dhexroorka siligga ee xariiqda 4. Haddii lambarka siligga ee ka hooseeya laynka 4 la isticmaalo, dhererka qalooca ayaa sida cad ka weyn 150 mitir;
Si adag u hadal, sababtoo ah soosaarayaasha kala duwan ee kalluumeysiga si adag uma mideyn karaan dhexroorka lambarka xarriiqda, iyo soo saarayaasha doonyaha kalluumeysiga ee kala duwan ayaa mideyn kara dhexroorka koobka, laakiin qoto dheerida koobku ma noqon karto mid joogto ah. Sidaa darteed, summadaha kala duwan, xitaa haddii dhexroorka koobku is waafaqsan yahay, waa inay khaladaad ku yeeshaan dhererka xarigga kalluumeysiga ee qaloocan. Haddii ay isticmaalaan calaamado kala duwan oo ah khadka kalluumaysiga, khaladku wuu ka sii weynaan doonaa;
Soo -koobidda: dhexroorka weyn ee koobka safka kalluumeysiga, ayaa dhererka dhererka xarigga lagu dhaawici karaa isla dhexroorka iyo lambarka xarriiqda. 3000 iyo 4000 doonyaha kalluumeysiga waxay isticmaalaan lambar isku mid ah, 4000 oo doonyood oo kalluumeysi ah ayaa dabaylo khad dheer leh;
Farqiga 2: 4000 doonyaha kalluumaysiga ayaa si dhakhso leh u qaata 3000 doonyood oo kalluumaysi ah
Dhexroorka koobku waa halbeegga dhexroorka dibadda ee doonta kalluumeysiga. Si kale haddaan u dhigno, waa dhererka goobaabin xariijinta kalluumeysiga oo ku wareegsan koobka qaloocan. Kadibna doonta kalluumeysiga ayaa sidoo kale wareegeysa. 3000 doonyood oo kalluumeysi ah ayaa dib u qaata xariggii kalluumeysiga 3cm iyo 4000 oo doonyood oo kalluumeysi ah ayaa dib u soo celinaya xariggii kalluumeysiga 4cm; Sidaas darteed, 4000 oo doonyood oo kalluumaysi ah ayaa si degdeg ah u qaadan kara 3000 doonyood oo kalluumaysi ah;
Tani waxay leedahay ahmiyad la taaban karo oo weyn marka la dooranayo doonyaha kalluumeysiga. Tusaale ahaan, waxaan isticmaalnaa 2000 doonyood oo kalluumeysi ah in ka badan 3000 doonyood oo kalluumeysi ah. Miyeynaan ogeyn in 3000 oo doonyood oo kalluumeysi ah ay si xawli ah u qaadaan 2000 doomood oo kalluumeysi ah? Sababtoo ah 3000 doomood oo kalluumeysi ah ayaa si tartiib tartiib ah u qaata waxayna u baahan yihiin bareega sare; Sidan oo kale, iyadoo xawaare sare leh oo si tartiib-tartiib ah u qaadaysa, luminta bareega taayirada kalluumaysiga ayaa la yarayn karaa, iyo hufnaanta xakamaynta kalluunka ayaa si waxtar leh loo hagaajin karaa;
Farqiga ayaa ah in doonida kalluumeysiga ee 4000 ay xoogaa ka culus tahay kana weyn tahay 3000 kalluumeysi
Marka dhexroorka weelka kalluumeysigu uu weynaado, qoto dheer ee koobka xariiqa ayaa xoogaa ka weyn doona. Marka tirada faasaska la simo, mugga markab kalluumeysi oo 4000 ah ayaa xoogaa ka weynaan doona markabka kalluumeysiga 3000, miisaankiisuna si dabiici ah ayuu u weynaan doonaa;
Sidan, sababta oo ah dhererka, qaabka jirka iyo dhererka gacanta kalluumeysatada ayaa kala duwan, waxaa lagu isticmaali karaa ulo dheer oo kala duwan; Sababta tan ayaa ah in aysan jirin halbeeg loogu talagalay noocyada kala duwan ee maraakiibta kalluumeysiga iyo dhererka kala duwan ee usha kalluumeysiga;
Saddexda kor ku xusan ee u dhexeeya markabka kalluumaysiga 3000 iyo markabka kalluumaysiga 4000 ayaa lagu muujiyey dagaalka dhabta ah. Waxaa la fahmi karaa in haddii aagga kalluumeysigu ballaaran yahay oo kalluunka la beegsanayo uusan yarayn, markaa saamaynta adeegsiga weelka kalluumeysiga 4000 ayaa ka fiican. Ka dib oo dhan, oo leh isla lambar lambar, markabka kalluumeysiga 4000 wuxuu dabeyli karaa khadad badan wuxuuna ka sii ciyaari karaa meel fog; Taas beddelkeeda, haddii dusha biyuhu yaraadaan oo kalluunka la beegsanayo uu yar yahay, 3000 doonyood oo kalluumaysi ah ayaa ku filan.